ကုမ္ပဏီများအိမ်နှင့်အဖွဲ့ဝင်ပြန်ကြားရေးမှာ, Ltd. vs. ဗြိတိန် LLP မှတ်ပုံတင်ခြင်း
ဗြိတိန် LLP ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း
ဗြိတိန် LLP ဖွဲ့စည်းရေး ဗြိတိန်တွင်စာရင်းကိုင်ကုမ္ပဏီများနှင့်ဥပဒေကုမ္ပဏီများများအတွက်လူကြိုက်အများဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်လာခဲ့ပါသည်။ ဤတွင်ကျနော်တို့ကုမ္ပဏီ၏ဤအမျိုးအစား၏အကျိုးကျေးဇူးများဆွေးနွေးရန်နှင့်ဦးမည် Ltd မှ vs. LLP။ ဗြိတိန်နိုင်ငံအနေနဲ့, Ltd. ကုမ္ပဏီကဲ့သို့, ဘေးဖယ်ယင်း၏မိတ်ဖက်၏ဘဝအသက်တာကနေတစ်ဦးန့်အသတ်သက်တမ်းရှိပြီးကြောင့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်အတော်လေးဆွဲဆောင်မှုဖြစ်ပါတယ်။ ဘုံမေးခွန်းများကို "ဖြစ်ကြ၏ကန့်သတ်ကုမ္ပဏီတစ်ခု LLP ၏အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်နိုင်သလား? "နှင့်"သူကားအဘယ်သူတစ်ဦး LLP ၏အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်နိုင်ပါတယ်? "အဖြေဟုတ်, တစ်ကန့်သတ်ကုမ္ပဏီတစ်ခု LLP အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးအဖြစ်သဘာဝလူတစ်ဦးဖြစ်နိုငျသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ ထို့အပြင်မည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်သို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီမသက်ဆိုင်သို့မဟုတ်နေထိုင်ရာသို့မဟုတ်နိုင်ငံသားတစ်ဦး LLP အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ ကြောင်းကိစ္စများအတွက်တစ်ဦး LLP ကန့်သတ်ကုမ္ပဏီ (ကော်ပိုရေးရှင်း) ၏ရှယ်ယာရှင်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဒါကြောင့်ပါဝင်ပတ်သက်တစ်ဦးတည်းသာလူ့လူတစ်ဦးနှင့်အတူတစ် LLP ရှိသည်ဖို့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ တစ်ဦး LLP ကိုအနည်းဆုံးနှစ်ခုအဖွဲ့ဝင်များရှိရမည်, ဒါကြောင့်သဘာဝလူတစ်ဦးအဖွဲ့ဝင်တဦးတည်းဖြစ်နိုင်သည်။ ထို့နောက်ထိုလူတစ်ဦးကပိုင်ဆိုင်နေတဲ့ကန့်သတ်ကုမ္ပဏီအခြားအဖွဲ့ဝင်တဦးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
(ဥပမာဒီတစ်ခုကဲ့သို့) တစ်ဦးအတွေ့အကြုံရအေးဂျင့်ကိုဆက်သွယ်ပါ။ သင့်ရဲ့အေးဂျင့်ဗြိတိန်နိုင်ငံကုမ္ပဏီများအိမ်မှာ LLP မှတ်ပုံတင်ရန်ပါလိမ့်မယ်။
သင့်အနေဖြင့်ဗြိတိန် LLP မဆိုအခွန်ပေးဆောင်ရန်မဟုတျကွောငျးကိုသိရန်သည်ဝမ်းမြောက်ကြလိမ့်မည်။ အဆိုပါအခွန်တာဝန်ရိုးရှင်းစွာကုမ္ပဏီ၏အဆင့်မှာမဆိုအခွန်ခြင်းမရှိဘဲ, အဖွဲ့ဝင်များမှတဆင့်စီးဆင်း။
ဗြိတိန် LLP အကျိုးကျေးဇူးများ
တစ်ဦးကိုဗြိတိန် LLP ဖွဲ့စည်းမျိုးစုံကြိုးကြေးဇူးမြားပေးထားပါတယ်။ ဤရွေ့ကားအကျိုးခံစားခွင့်များပါဝင်သည်:
တစ်ဦးကဗြိတိန်ကန့်သတ်တာဝန်ယူမှုကိုမိတ်ဖက်ဗြိတိန်ဥပဒေနှင့်အညီတစ်ဦးကော်ပိုရေးရှင်း entity ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကပုံမှန်မိတ်ဖက်မတူဘဲကမိတ်ဖက်များ၏ဘဝလွတ်လပ်သောကြောင်းစဉ်ဆက်မပြတ်ဥပဒေရေးရာဖြစ်တည်မှုရှိပြီးဖြစ်ပါသည်။
ဗြိတိန် LLP အဖွဲ့ဝင် (လိမ်လည်မှုသို့မဟုတ်အမှားများကုန်သွယ်၏မရှိခြင်းအတွက်) စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတာဝန်ယူမှုမှကာကွယ်နေကြပါတယ်ဒါကြောင့်သူတို့ကုမ္ပဏီအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံကြပါပြီထက်ပိုမိုဆုံးရှုံးမှကာကွယ်နေကြပါတယ်။
တစ်ဦးကဗြိတိန် LLP ဗြိတိန်၌မအခွန်အခများပေးဆောင်။ အဆိုပါအခွန်တာဝန် Self-အလုပ်ဝင်ငွေအဖြစ်ထက်န်ထမ်းအဖြစ်မိတ်ဖက်ဖို့ ဖြတ်. စီးဆင်း။
အဲဒီမှာရေးသားထားသောမိတ်ဖက်သဘောတူညီမှုရှိသည်ဖို့မလိုအပ်, အလိုဆန္ဒမဟုတ်လျှင်, စည်းမျဉ်းများ default အနေဖြင့်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ အကြောင်းမူကား,
ကော်ပိုရိတ်အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်များသောအားဖြင့်နေသမျှကာလပတ်လုံးကော်ပိုရေးရှင်းဗြိတိန်အတွက်လုပ်ငန်းသို့မဟုတ်ကုန်သွယ်မှုမပြုအဖြစ်ဗြိတိန် LLPs မှလျှောက်ထားသည်။
တစ်ဦးတည်းသာအဖော်တစ်ဦးကိုဗြိတိန် LLP ထည့်သွင်းနိုင်ရန်အတွက်လိုအပ်ပါသည်။
ဗြိတိန်ကော်ပိုရေးရှင်း GBP ၏နိမ့်ဆုံးအခွင့်အာဏာမြို့တော်ပေးထားပါတယ်။
ဗြိတိန်နိုင်ငံတွင် corporate ဥပဒေပြဌာန်း 2006 ၏ကုမ္ပဏီများအက်ဥပဒေအောက်တွင်ကုမ္ပဏီဥပဒေဖြင့်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ထားသည်။ ဤသည်အက်ဥပဒေဟာကော်ပိုရိတ်ဆိုထားသည် လေ့ကျင့်ရေး နှင့်ဗြိတိန်၌လုပ်ဆောင်ချက်များကို။ ဒါ့အပြင်ယူကေမှာကော်ပိုရိတ်လုပ်ရပ်များထိန်းညှိသောအခြားအမှုအပုကွှေးမွီမဆပျနိုငျသောအက်ဥပဒေ 1986, ဗြိတိန်ကော်ပိုရိတ်အုပ်ချုပ်မှုကုဒ်, ဥရောပသမဂ္ဂညွှန်ကြားချက်များနှင့်တရားရုံးအမှုများကိုပါဝင်သည်။ ဒါဟာအမေရိကန်အတွက် LLC ရန်အလွန်ဆင်တူသည်။ ဗြိတိန်အတွက်စာရင်းကိုင်နှင့်ဥပဒေရေးရာစီးပွားနယ်ပယ်တွင်အတော်များများသည်ယခုအခါ၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်ကုမ္ပဏီများလုပ်ကိုင်ရန်ဤအဖွဲ့အစည်းများကိုအသုံးပြုပါ။
ဗြိတိန်နိုင်ငံအနေနဲ့ LLP ဖွဲ့စည်းသူများသည်ပြီးသားကုမ္ပဏီအမည်များကိုရှိရင်းစွဲဆင်တူမဟုတ်ကြောင်းထူးခြားတဲ့အမည်အားကောက်ရမည်ဖြစ်သည်။ ပုံမှန်အားဖြင့်, စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနာမသုံးဗားရှင်းသူတို့ထဲကတဦးတည်းအတည်ပြုလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ချက်တွေနဲ့တင်သွင်းနေကြသည်။ ဗြိတိန်နိုင်ငံတွင်ကုမ္ပဏီအမည်များကိုဆန္ဒရှိလျှင်ဖြည့်စွက်မတိုင်မီ reserved နိုင်ပါသည်။
ဗြိတိန်မှာသူတို့ရဲ့အမည်များကိုမှတ်ပုံတင်ဖို့ကုမ္ပဏီများက "နောက်ဆက်ကိုသုံးပါကန့်သတ်တာဝန်ဝတ္တရားမိတ်ဖက်"," LLP, "သို့မဟုတ်ဝလေဘာသာစကားညီမျှ" Partneriaeth Atebolrwydd Cyfyngedig, "သို့မဟုတ်" PAC ။ "
ဗြိတိန်အတွက်ကုမ္ပဏီအမည်ကိုတွင်ထည့်သွင်းမရနိုငျသောစကားဟူအထူးခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲလည်းပါဝင်သည်, အင်ပါယာ, သရဖူ, Imperial, ဝင်ဆာ, တော်ဝင်, အာမခံချက်, ဘဏ်, အဆောက်အအုံ Society ကဗြိတိန်, အမျိုးသား, ဂရိတ်ဗြိတိန်, ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း, အင်္ဂလန်, အင်္ဂလိပ်, စကော့တလန်များမှာ စကော့တလန်, ဝေလနယ်, ဝလေ, အိုင်ယာလန်သို့မဟုတ် Irish ။ သို့သော်အတိုကောက် '' GB ကို 'သို့မဟုတ်' 'ဗြိတိန်' 'ကိုအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
ကော်ပိုရေးရှင်းအီးယူမှလင့်များပြသလျှင်နာမ၌ 'ဥရောပ' 'သာခွင့်ပြုချက်နှင့်အတူအသုံးပြုသောနှင့်နိုင်ပါတယ်။ '' အင်တာနေရှင်နယ် '' ကိုလည်းခွင့်ပြုချက်လိုအပ်သည်နှင့်ကုမ္ပဏီ၎င်း၏အမည်ကို၌ဤစကားလုံးသုံးစွဲဖို့ရေခြားမြေခြားကုန်သွယ်တွင်ပါဝင်ပတ်သက်ရမည်ဖြစ်သည်။
ဗြိတိန်နိုင်ငံအနေနဲ့ LLP ၏ဖွဲ့စည်းခြင်းလိုက်စားသူများသည်ဒေသခံတစ်ဦးမှတ်ပုံတင်အေးဂျင့်တစ်ဦးကဒေသခံရုံးလိပ်စာနှစ်ခုလုံးရှိရမည်။ ဤသည်မှာလိပ်စာဖြစ်စဉ်ကိုဝန်ဆောင်မှုတောင်းဆိုမှုများအတှကျအသုံးပွုပါလိမ့်မည်, နှင့်ကုမ္ပဏီဖြစ်ပေါ်လာသောကြောင်း (ဥပမာဒီတစ်ခုကဲ့သို့) သင့်ရဲ့အေးဂျင့်များကထောက်ပံ့ပေးလိမ့်မည်။
ဗြိတိန်နိုင်ငံအနေနဲ့ LLP အနည်းဆုံးရှယ်ယာရှင်ရှိရမည်။ ခွင့်ပြုရှယ်ယာရှင်များအများဆုံးအရေအတွက်ကငါးဆယ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဗြိတိန်နိုင်ငံကပုဂ္ဂလိကလူပုဂ္ဂိုလ်များနှင့်ကော်ပိုရိတ်အဖွဲ့အစည်းများနှစ်ဦးစလုံးရှယ်ယာရှင်များဖြစ်ခွင့်ပြုနှင့်လည်းပူးတွဲရှယ်ယာများအတွက်ခွင့်ပြုထားသည်။
တစ်ဦးကဗြိတိန် LLP အနည်းဆုံးဒါရိုက်တာရှိရမည်။ တစ်ဦးကအတွင်းရေးမှူးတစ်ဦးတည်းညွှန်ကြားရေးမှူးတစ်ဦးအတွင်းရေးမှူးမဖွစျနိုငျသောကွောငျ့ဒါအားလုံးကုမ္ပဏီများသည်အနည်းဆုံးလူနှစ်ဦးရှိရမည်, လိုအပ်ပါသည်။
ကုမ္ပဏီနှင့်ဗြိတိန်၌ LLPs ထည့်သွင်းရန်ရွေးချယ်ခြင်းကန့်သတ်ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်များအတွက်နိမ့်ဆုံးအခွင့်အာဏာမြို့တော် GBP0ဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုလိုသည်မှာသည်ရှယ်ယာမြို့တော်ကြေညာဖို့လိုအပ်ချက်မရှိ။
ဗြိတိန်အတွက် LLP ကော်ပိုရေးရှင်းဖွဲ့စည်းကုမ္ပဏီနှင့်ကန့်သတ်ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်တွေကော်ပိုရိတ်အခွန်ကောက်ခံမှုမှကင်းလွတ်ခွင့်ဖြစ်နိုင်သည်။ အဆိုပါကော်ပိုရေးရှင်းမျှစီးပွားရေးလုပ်ငန်းသို့မဟုတ်ကုန်သွယ်မှုယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းနှင့်အတူသို့မဟုတ်အတွင်းထွက်သယ်ဆောင်ကြောင်းပေးအခွန်ကနေကင်းလွတ်ခွင့်ဆက်လက်တည်ရှိနိုင်ပါတယ်
ဗြိတိန်တွင်ထည့်သွင်းနှစ်ပတ်လည်မှတ်ပုံတင်ရေးအခကြေးငွေကုမ္ပဏီနှင့်ကန့်သတ်ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်တွေပုံမှန်အားဖြင့်တစ်နှစ်ပေါင် 900 အကြောင်းကိုကုန်ကျခဲ့ပါတယ်။
တစ်ဦးကိုဗြိတိန် LLP ဖွဲ့စည်းအလားအလာကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ကော်ပိုရေးရှင်းသတင်းအချက်အလက်အချို့ကိုအများပြည်သူရရှိနိုင်ပါသည်လုပ်ခံရဖို့မျှော်လင့်ထားသင့်ပါတယ်။
ဥပမာအားဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နှစ်ခု designated အရာရှိများတစ်ဦးအမှုဆောင်ဒါရိုက်တာနှင့်အတွင်းရေးမှူးတစ်ဦးကိုဗြိတိန် LLP ကခန့်အပ်ရမည်ဖြစ်ပြီးအဆိုပါကုမ္ပဏီအချို့ရှုထောင့်အဘို့အထိုက်စဉ်းစားနေကြသည်, သူတို့ရဲ့သတင်းအချက်အလက်ယေဘုယျအားဖြင့်အများပြည်သူလုပ်ဖြစ်ပါတယ်။
ကုမ္ပဏီများကော်ပိုရေးရှင်းစာရင်းကိုင်မှတ်တမ်းများကိုစောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်အများပြည်သူအားဖြင့်စစ်ဆေးခြင်းများအတွက်အကောင့်တင်သွင်းရမည်ဖြစ်သည်။ ဗြိတိန်နိုင်ငံတွင် LLPs ၏ပိုင်ရှင်များနှစ်ပတ်လည်အခွန်ပြန် file များနှင့်စာရင်းစစ်၏အမှု၌နှစ်စဉ်အခွန်နှင့်ဘဏ္ဍာရေးမှတ်တမ်းများကိုစောင့်ရှောက်ရန်လိုအပ်သည်။ ကုမ္ပဏီများကော်ပိုရေးရှင်းစာရင်းကိုင်ကာလရဲ့အဆုံးမှာများသောအားဖြင့်9လနှင့် 1 နေ့ဖြစ်သောနှစ်စဉ်နောက်ဆုံးနေ့အားဖြင့်နှစ်စဉ်အခွန်ပြန် file ရမည်ဖြစ်သည်။
ဗြိတိန်နိုင်ငံအနေနဲ့ LLP ထည့်သွင်းဖို့ရွေးချယ်ရာတွင်သူများသည်တစ်ခုလုံးကိုလုပ်ငန်းစဉ်နှင့် ပတ်သက်.3ရက်သတ္တပတ်ယူမျှော်လင့်ထားနိုင်ပါတယ်။ ဤသည်ပြီးစီးအချိန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်စာရွက်စာတမ်းများဘယ်လောက်တိကျစွာယုံကြည်မှုကို name ကိုမှတ်ပုံတင်နှင့်အတူ turnaround ပေါ်တွင်မူတည်သည်အဖြစ်။ (ဥပမာဒီတစ်ခုကဲ့သို့) သင့်ရဲ့အေးဂျင့်ဖြစ်နိုင်ဖွယ်သူတို့ထဲကအတော်များများဖွဲ့စည်းခဲ့ကြပါလိမ့်မယ်ကြောင့်, လိုအပ်ချက်များကိုပထမဦးဆုံးပုံစံတင်ပို့ရန်ကြိုးပမ်းမှုအပေါ်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးရပါမည်။
ကမ်းလွန်ရေတိမ်ပိုင်းကုမ္ပဏီများသည် (ပြီးသားဝယ်ယူများအတွက် "ကမ်းလွန်ရေတိမ်ပိုင်း" ပေါ်တွင်တင်သွင်းခြင်းနှင့်နေရာချနေကြကြောင်းကုမ္ပဏီများက) ချက်ချင်းဝယ်ယူဘို့ရရှိနိုင်ပါသည်။ ဖွဲ့စည်းခြင်းသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီအသက်မြန်နှုန်းကိုသင်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်, ဒီ option ကိုတစ်ဦးသာကိုင်သာရှိတဲ့ရွေးချယ်မှုဖြစ်နိုင်ပါသည်။